I-Girassol -Ifulethi lesimanje lokuziphekela elinendawo yokubhukuda - I-Airbnb
I-Girassol -Ifulethi lesimanje lokuziphekela elinendawo yokubhukuda
Vila Pouca da Beira, Oliveira do Hospital, i-Portugal
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Wil
I-Girassol - ifulethi lesimanje e-Vila Pouca da Beira, idolobhana elisenkabeni ye-green e-Portugal. Indawo ethulile, enamasimu namadamu okubhukuda abheke izintaba, ukubukwa kwezwe okumangalisayo kanye nombukwane wansuku zonke wokushona kwelanga.
I-Girassol - Ifulethi lesimanje eliziphekelayo elinamachibi okubhukuda, ingadi namathala esitezi esiphansi.
Ifulethi lesimanjemanje eliwu-48m2 lokuziphekela linikeza ukubukwa kwentaba, ingadi kanye namachibi, lihlotshiswe ngemidwebo yamaciko endawo, linesitofu se-pellet, linombhede ophindwe kabili ongavulwa ube ngamawele angu-2, indawo yokuhlala efakwe osofa besikhumba nekhebula. Umabonakude. Indawo yokudlela enezihlalo ezi-4, ikhishi elihlome ngokuphelele elinomshini wekhofi, iketela, i-toaster, umshini wokunyathelisa we-citrus, i-microwave, i-oven, isitofu, ifriji/ ifriji kanye nomshini wokuwasha izitsha. Igumbi lokugezela lesimanje elineshawa, izinto zokugeza zamahhala, i-wifi yamahhala, indawo yokupaka eyanele yamahhala evikelekile enokufinyelela okuhle, evumelana nezingane.
Ngicela ubone elinye ifulethi lami - i-Amarilis ukuze uthole inketho yokunethezeka eyengeziwe noma udinga izindawo zokulala ezengeziwe.
Umbhede olala umuntu oyedwa o-1, 1 usofa, Umbhede wengane e-1
KuneCafe/ Indawo yokuphuzela utshwala endaweni lapho kutholakala khona isinkwa esisha, amasemishi athosiwe namakhekhe. Izindawo zokudlela ezinhle eziseduze zesiPutukezi, isiNtaliyane namaNdiya zikude ngamakhilomitha angu-2. Isonto elidala kunawo wonke eYurophu liqhele ngamakhilomitha angu-2. wamukelekile ukuqasha amabhayisikili noma uhambo 6 km wehle ukuze ubhukude ogwini lomfula, thola umgwaqo wakudala waseRoma, uhlole inqaba eyincithakalo.
I-quinta ihlala umnikazi u-Wil, ohlala endaweni ehlukene yendlu. Anganikeza izikhombisi-ndlela namathiphu emizila yokuhamba ngezinyawo, izindawo ozithandayo neziphakamiso zezitolo eziseduze, nezindawo zokudlela endaweni.
Inombolo yepholisi: 18573/AL